DFP : betsaka ny kajikajy politika | NewsMada
DFP : betsaka ny kajikajy politika
Mandeha sahady ny kajikajy politika ho an’ireo mijoro ho amin’ny dinika ho fanavotam-pirenena (DFP). Avy amin’izy ireo ihany no mitantara ny ketriketrika hatao mandritra ny fihaonambe karakarainy.
Manetsika ireo antoko politika maro izy ireo ho tohatra fiakarana sy handravana ny efa ka mikatsaka ny hametraka rafitra vaovao. Tsy vaovao amin’ny hafa intsony anefa ny tetika ambadik’ity DFP ity fa toy ny fanaon’ny teo aloha ihany.
Malaina hiray petsapetsa amin’izy ireo ny ankamaroan’ny antoko ka toa mihanjahanja irery ireo vitsivitsy mikiry hanao zaikabe.
Milaza ny antoko sasany fa efa tsy andrin’izy ireo intsony ny hirodanan’ity fitondrana ity, mba hisian’ny Tetezamita faran’ny haingana. Ny hafa milaza fa ny hisian’ny rafitra tetezamita hiarahana mitondra mialoha ny fifidianana, hatao eto no tena tanjon’izy ireo amin’izany.
Niaraha-mahalala ny fahapotehana nentin’izany Tetezamita izany ka tsy mbola tafarina hatramin’izao. Tsy misy te hiverina amin’izany intsony ny rehetra afa-tsy ireo manao kajikajy politika.
Manambatra hery ihany koa ny antoko politika sasany ary manizingizina fa tsy hanaiky hatramin’ny farany izy ireo amin’ny mety ho endrika fanakorontanana ataon’ny mpanao politika, mihevi-tena handrava ny efa mijoro amin’izao.